Jeegaga 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Mudanayaal.Ujeeddada ayaa ah in la qabto ama curyaamiya qaybaha ka soo horjeeda. Ciyaaryahankii maamusha inuu cuno mid kasta oo ka mid ah qaybaha ka soo horjeeda ayaa ku guuleysta ciyaarta. Waxaan ka hadleynaa mid ka mid ah ciyaaraha guddiga ugu caansan uguna caansan dunida.
Ciyaarta Checkers ayaa lagu ciyaaraa inta udhaxeysa 2 ciyaartoy, loox laba jibbaaran, oo ah lixdan iyo afar jibbaaran oo isweydaarsi fudud iyo mugdi ah, oo leh laba iyo toban cadcad iyo laba iyo toban gogo 'madow ah.
Checkers: Sidee loo ciyaaro talaabo talaabo?
Si loogu ciyaaro jeegaga khadka tooska ah ee bilaashka ah, waa inaad sameysaa sii wad tilmaamahan:
Isla marka aad gasho goobta, ciyaarta waxaa lagu soo bandhigi doonaa shaashadda. Waa inaad kaliya garaac ciyaarta oo hadda waad bilaabi kartaa xulashada qaabeynta aad jeceshahay. Waxaad awoodi doontaa inaad kala doorato inaad la ciyaarto saaxiib, ka dib markii aad doorato, waxaad awoodi doontaa inaad bilowdo ciyaarta.
Hadda, waxaad ka heli doontaa badhano waxtar leh. Karaa "Ku dar ama ka saar codka ", sii badhanka "Play"Oo bilow ciyaarta, waad awoodaa"Hakad"Iyo"Dib u Bilow"Xili walba.
Kaaji kan kaa soo horjeedaa inuu dhaqaaqo laakiin qaybo.
Kadib markaad buuxiso ciyaar, guji “Dib u Bilow”In dib loo bilaabo.
Ciyaarta Jeegaga: muuqaalada
"Damas“Waa ciyaar gudniino soo jirtay qarniyo badan oo khamaarisyo la dhigto si isdaba-joog ah isla markaana goolal looga qaadan karo kooxda ka soo horjeedda. Waad guuleysaneysaa marka qofka kaa soo horjeedaa uusan laheyn qaybo badan ama la dhaqaajiyay si aysan mar dambe suurtagal u noqon karin.
Ujeedada ciyaarta "Checkers"
Hadafka "marwooyinku" waa xannibo dhaqdhaqaaqa ka soo horjeedka ama uu ka qaado qaybo badan oo uusan awood u lahayn inuu dhaqaaqo.
Ciyaar qosol badan
Tirada ciyaartoyda, da'da iyo waqtiga ciyaarta:
Laga soo bilaabo sannadihii 6
12 cad cad
12 gogo 'madow
Xeerar aad u fudud iyo, sidaas darteed, waxay ku habboon yihiin ciyaartoy da 'yar, laakiin sidoo kale waa u raaxeysan karaan dadka waaweyn.
Runtu waa tan cidina si sax ah uma oga goorta iyo qaabka ay ciyaarta ku bilaabatay, laakiin waxa hubaal ah in Mudanayaashu ay jireen muddo dheer, in kastoo Plato Wuxuu ka been sheegay ciyaartii uu Giriiggu ka amaahday Masar.
Aragtida koowaad waxay tahay in nooca ugu da'da weyn ee Checkers uu ahaa ciyaar laga helay qadiimiga qadiimiga ah Uur, Ciraaq. Shukaansiga Kaarboonku wuxuu tilmaamayaa taas ciyaarta ayaa hore u jirtay ilaa saddex kun oo BC.
Si kastaba ha noqotee, nuqulkii ugu horreeyay ee loo maleynayay inuu adeegsaday guddi xeeladeysan oo kala duwan, tiro kala duwan oo gogo 'ah, gabi ahaanba cidina ma oga waxa sharciyada saxda ah ay ahaayeen.
Masar hore, ciyaar la yiraahdo Alquerque, oo adeegsaday loox 5X5 ah, wuxuu ahaa ciyaar la xiriirta jeegaga oo si ballaaran loo ciyaaray waqtigaas.
Taariikhyahanadu waxay raadraaceen asal ahaan 1400 BC oo iyagu waxay ku andacoodaan in ay caan ahaa si weyn u waxaa laga ciyaaray adduunka galbeedka oo dhan kumanaan iyo kumanaan sano.
Hareeraha 1100 AD, nin Faransiis ah ayaa lahaa fikradda ah inuu ku ciyaaro jeegaga sabuuradda. Taas macnaheedu waxa weeye in la sii ballaadhiyo tirada qaybaha oo laga dhigo laba iyo toban dhinac kasta iyo dhinac kasta. Noocaan cusub waxaa loo yaqaan "Feejignaanta"Si fiican"Ferses".
Dhawaan, Faransiiska ayaa sidoo kale garwaaqsaday in boodbooyinku qasab ka dhigaan ciyaarta inay noqoto mid aad u dhib badan waxayna go'aansadeen inay ugu yeeraan nuqulkan cusub "Jeu xoog".
Isbeddelka qadiimiga ah waxaa loo tixgeliyey ciyaar bulsheed ee haweenka waxaana loogu magac daray "Le Jeu Plaisant De Dames" (Ciyaarta Farxadda leh ee Checkers).
Laga soo bilaabo miisaska ilaa kombiyuutarada
Iyadoo la raacayo qawaaniinta Checkers oo Faransiisku qeexay, ciyaarta waxaa loo dhoofiyay Ingiriiska iyo Ameerika, iyadoo sii wadaysa xukunkeeda adduunka. G. Brittany, waxay heshay magaca " Qaababka "iyo xisaabiyihii caanka ahaa William Payne ku qoray qormooyinkiisa khamaarka toddoba iyo toban iyo konton iyo lix. Si kastaba ha noqotee, sanadihii la soo dhaafay, Damas ayaa sii waday caankeeda.
Sidaa darteed, xaddidaadda dhaqdhaqaaqa 2 ayaa loo sameeyay ciyaartoy khibrad leh, iyaga oo ku qasbaya inay ciyaarta ku bilaabaan si aan kala sooc lahayn. Maanta, illaa 3 xaddidnaanta dhaqdhaqaaqa ayaa loo isticmaalaa horyaalada.
Mudanayaashu waxay gaareen shaashadaha barnaamijyada kombiyuutarka xitaa horeba Dagaalkii Labaad ee Adduunka.
In kasta oo kumbuyuutarradu ay ku jireen marxalad qallafsan oo xagga horumarka ah, haddana waxtarka leh Alan Turing waxay u sameysay barnaamij aasaasi ah Mudanayaal ubaahan xisaabinta in lagu sameeyo warqad (iyadoo ay ugu wacan tahay mashiinada oo wali shaqadii qaban waayey).
Ugu dambeyntii, 1952 Waxay ahayd sanad cajiib ah taariikhda midabada leh ee ciyaarta, goorma Arthur L. Samuel abuuray ah barnaamijka jeegaga ugu horreeya ee uu isticmaalo kombuyuutar. Si tartiib tartiib ah, barnaamijyadan cayaaraha ayaa loo hagaajiyay markii xawaaraha iyo awoodda kombiyuutarada ay kordheen.
Bishii Luulyo XNUMX, koox ka tirsan Jaamacadda Alberta oo uu hoggaaminayey Jonathan Schaeffer ayaa ku dhawaaqay in ay xalliyeen ciyaarta jeegaga.
Barnaamijka Chinook , oo ay horumariyeen guud ahaan, waxay gaareen heer isbeddelkiisa oo la caddeeyay in aan laga gudbi karin. Sidan oo kale, kooxdu waxay awood u yeelatay inay caddeyso in hubiyayaashu ay yihiin ciyaar barbaro ah, taas oo ah, had iyo jeer barbaro ayey ku dhamaan doontaa haddii labada koox ee ka soo horjeedaa ay sameeyaan dhaqdhaqaaqyo sax ah.
Si kastaba ha noqotee, ciyaartu waxay sii wadaa caankeeda, iyadoo dadka adduunka oo idil ay ka ciyaarayaan noocyadooda kala duwan madadaalo, tababarida fikirkooda macquul ah, ama si fudud ugu raaxeysanaya waqti tayo leh oo ay la ciyaarayaan qoyskooda iyo asxaabtooda.
Sidee loo ciyaaraa "jeegaga"?
Hal ciyaartoy ayaa hela qaybaha cad, kan kalena mid kasta iyo mid kasta oo ka mid ah qaybaha madow: yaa ciyaara midabkee, labada ciyaartoy ayaa kala dooran kara.
Qaybaha ayaa markaa la dhigaa safafka ugu dambeeya ee guddiga ciyaarta oo midba midka kale wajahayo.
Had iyo jeer iyo duruufaha oo dhan ka bilow qaybaha mugdiga ah.
Sidee loo ciyaaraa
Qeybaha marwalba iyo xaalad kasta ayaa la geliyaa jihada oo ujeedo duurka ujeeda. Haddii uu horayba u jiro dhagax berrinka, lama qabsan karo, iyadoo aan loo eegin haddii dhagaxaaga ama kan kaa soo horjeedaa uu ku yaal garoonka.
Haddii aad la kulanto laba jibbaaran oo soohdin la leh laba jibbaaran oo leh dhagax ka soo horjeed ah, waad kaga boodi kartaa tallaabada xigta, illaa iyo inta jadwalka ka dambeeya dhagaxa ka soo horjeedka uu wali madhan yahay. Waxaad ku boodaysaa qaybo iska soo horjeeda ka dibna waad ka saari kartaa ciyaarta. Inaad ku booddo qaybahaaga waa mamnuuc. Dib uma noqon kartid marwada mooyee.
Hadaad gaadho safka kore ee qofka kaa soo hor jeeda oo leh dhagaxaaga, ciyaaryahan helo boqorad ah yaa wax ka qaban kara xaaladaan marka xigta.
La Akeldama cadeeyaa iyadoo la dhigayo 2 qaybood midba midka kale. Tan waxaad u baahan tahay a gabal taas oo ahayd laga saaray ciyaarta.
Faa'iidooyinkeedu waa taas u dhaqaaqi kara wajiga horay iyo gadaal gadaal ula kac ah, taasi waa, waxaad u dhaqaaqi kartaa inta beerood oo fool-ka-fool ah ama dhinac-gees ah sida aad jeceshahay. Xakamaynta qaybaha ka soo horjeedaa waxay u dhacdaa si isku mid ah. Ciyaaryahan kasta wuxuu helayaa ugu badnaan hal boqorad. Haddii aad lumiso boqoradda feejignaan la'aan, waxaad u badan tahay inaad hesho haweeney labaad.
Ciyaaryahankii ugu horeeyay ee dhaqaaq sameeya ayaa lumiyay.
Waa maxay ujeedada "marwada"?
Waa inaad qaadataa mid kasta oo ka mid ah dhaqdhaqaaqa ka soo horjeedka kan kaa soo horjeeda ee garaacaya ama xannibaya gabalkiisa.
Sidee loo kasbadaa "Dama"
Haddii qofka kaa soo horjeedaa uusan dhaqdhaqaaq dheeraad ah lahayn, waad guuleysan doontaa.
Kumaa "Marwada" ku habboon?
Ciyaarta guddiga "Daae" waa loogu talagalay ciyaartoyga doonaya inay tijaabiyaan xirfadahooda istiraatiijiyadeed iyo taatiko labo-labo. Waxay caan ku noqotaa da'da lix jir.
Waa maxay kharashka "Marwada"?
Waxay kuxirantahay qeybiyaha iyo nooca, "Dame" ayaa isbedelaya toban euro ciyaaraha fudud iyo 63 euros moodooyinka aadka u sharafta badan.
Maxaa muhiim u ah "Marwada"?
Istaraatiijiyad ahaan, ficil xeeladeysan, iyo ka fikirista waqtiga ka hor si aad si xigmad leh ugu bilowdo tareennada.
Dib u garaacista "Checkers" miyaa loo dulqaadan karaa?
Haa, haddii aad dhejin karto, sidoo kale waad ka dhejin kartaa dhinac ilaa dhinac .
Boqorad leh qabasho: haddii ay jirto qayb kale oo ku taal sawirkaaga, codka qofka ka soo horjeedda, qabashada waxaa la samayn karaa oo keliya haddii ay jiraan hal ama in ka badan laba jibbaaran oo faaruq ah oo ka dambeeya qeybta ka soo horjeedda, qabashadu waa qasab. Boqoradda looma baahna inay sii wado goob ka dib gabalkii la qabtay. Sidoo kale waa la wada ogyahay aduunka oo dhan, wuxuu ka mid yahay cayaaraha ugu caansan sida: chess, checkers iyo dino.
Checkers Checkers waxay ka kooban yihiin xiddig 6 gees leh oo lagu soo daray shabakad. Meeshii xarriiqyada ay iskaga gudbaan, taas oo ah, barta, dhibcaha ayaa la dhigaa. Ujeeddadu waa u dhaqaaji 15-ka dusiyeen ee u jeedda barta xiddigga si toosan uga soo horjeedda.
Xeerarku waxay la mid yihiin kuwa dumarka caadiga ah, oo leh isbeddelada soo socda:
Boodhka waxaa lagu dhejiyay sagxad cad oo dhinaca bidix ah.
Ma sameyn kartid boqorado.
Haddii ciyaaryahan uusan qaadan gabal markii ay macquul tahay, waa laga badiyaa ciyaarta.
Dhab ahaantii isla sharciyada sida dusiyeyaasha dhaqanka, intaas mooyee ciyaaryahanka ayaa dooran kara inuu soo qabto gabal kasta oo uusan aheyn ikhtiyaarka ugu fiican ee waajibaadka. Faa’iidada kaliya ee ay boqoraddu kaheysato gabal caadi ah waa awood u lahaanshaha dhaqdhaqaaqa iyo wejiga gadaal uqabashada iyo wejiga hore.
Isbedelka kaliya ee ka imanaya qawaaniinta rasmiga ah ayaa ah xaqiiqda ah in toogashada aysan aheyn mid qasab ah iyo xaqiiqda ah, marka laga hadlayo toogashada taxanaha ah, haddii gabalku uu ka gudbo safka ugu dambeeya, waxaa loo dallacayaa boqoradda wuuna sii socon doonaa. ciyaarta boqorad ahaan.
Malaha waa kuwa ugu qalaad ee dumarka dhaqameed.
Adeegso shaashadda sideed jeer sideed. Ciyaaryahan kasta wuxuu leeyahay lix iyo toban qaybood oo wuxuu marka hore dhigaa safafka labaad iyo saddexaad ee iyaga ugu dhow.
Qeybaha ayaa dhaqaaqa qaab ahaan, dhinaca ama u jeedka xagga hore, laakiin aan gadaal u jeedin
Qabashada waxaa sidoo kale loo qaadaa wejiga hore ama wajiga dhinacyada. Gabalka qabsadaa wuu helayaa junto kii hore u degay gabalkii la qabtay, kaas oo isla markiiba la xakameynayo (inta lagu jiro dhaqdhaqaaqa, maahan dhamaadka saxda ah).
Markay gabal safka hoose gaarto waxay noqotay boqorad.
Boqoraddu way dhaqaaqi kartaa inta god ee ay rabto horay u waji, gadaal gadaal ama wajaho dhinacyada.
Qabsashada ay sameysay Boqoraddu waxay la mid tahay qaybaha caadiga ah, marka laga reebo inay awood u leedahay inay ka booddo xariiq laba jibbaaran oo madhan illaa laga gaarayo gabalka la qabtay.
Markasta oo ay suurtagal tahay, Qabsashadu waa qasab waana in la sameeyaa si looga saaro inta ka soo horjeedda qaybo badan oo suurtagal ah.
Guushu waxay ka dhalataa qabashada mid kasta iyo mid kasta oo ka mid ah qaybaha ka soo horjeeda, isaga oo ka dhigaya mid firfircoon ama ka tagaya, ugu badnaan, hal gabal oo ka dhan ah Boqoradda.
Kala duwanaansho ay sharciyadu si isku mid ah ula mid tahay ciyaarta rasmiga ah, laakiin kala duwanaanshahan, kan xabbadaha ka dhammaada ayaa guuleysta. Ciyaaryahanku, sidaas darteed, waa inuu xubnihiisa siiyaa sida ugu dhaqsaha badan.
Xeerka Mudanayaasha Rasmiga ah
Ciyaar iyo ciyaartoy
Mudanayaashu waa ciyaar maskaxeed ciyaaray laba qof.
Marka la qeexo, dadkaani waa ciyaartoy.
3. Ciyaarta jeegaga waxaa lagu ciyaaraa loox laba jibbaaran, oo loo qaybiyay 100 laba jibbaaran oo isle'eg, beddelkeedna iftiin iyo mugdi.
Waxaa lagu ciyaaraa guryaha mugdiga ah, ee loo yaqaan guryaha firfircoon.
Khadadka iskudhafka ah ee ay sameeyeen iskudhafyada mugdiga ahi waa jaantusyo, oo wadartoodu tahay 17. Sadarka ugu dheereeya guud ahaan wadarta 10 geesood oo ku biiraya labada geesood ee guddiga, waxaa loo yaqaan xagal ballaaran.
Loox ayaa la dhex dhigayaa ciyaartoyda, si jaantuska weyni uu uga bilaabmo bidix ciyaartoy kasta, markaa afargeeska koowaad ee bidix ee ciyaartoy kastaaba waa mugdi.
4. Guddida sidaa loo dhigay waxay leedahay magacyada soo socda:
Bases: dhinacyada guddiga ee ku wajahan ciyaartoyda ama taarikada taajkii.
Miisaska: tiirarka dhinaca.
Suxuunta: khadadka jiifka oo leh 5 god oo madow.
Tiirarka: khadadka toosan oo leh 5 god oo mugdi ah.
5. Heshiis ahaan, fagaarayaasha madow waxaa xeelad ahaan loo tiriyaa 1 illaa 50 (Qoraalka Manoury). Lambarkaan laguma daabici doono saxaaradda. Ka fiirinta sabuuradda xagga hore, nambarrada aan tooska ahayn waxay ka bilaabmaysaa bidix ilaa midig, waxayna ka bilaabaneysaa fagaaraha ugu horreeya ee mugdiga ah ee barxadda kore waxayna ku dhammaaneysaa fagaarihii ugu dambeeyay ee mugdiga ahaa ee barxadda hoose (Jaantuska I).
Waad xaqiijin kartaa taas:
Shanta guri ee mugdiga ah ee salka ku haya ama taarikada gogosha ayaa hela nambarada 1 ilaa 5 iyo 46 ilaa 50.
Shanta sanduuq ee mugdiga ah ee miisaska, ama tiirarka koowaad iyo kan ugu dambeeya, ayaa lagu calaamadeeyay lambarrada 6, 16, 26, 36 iyo 46 dhanka bidix, iyo lambarrada 5, 15, 25, 35 iyo 45 ee dhanka midig.
Guryaha mugdiga ah iyo kuwa ba'an ee ku yaal sawirka weyn waxaa loo yaqaan xaglaha guddiga.
6. Ciyaarta Checkers International waxaa lagu ciyaaraa 20 dhagax oo cad ama cad ah iyo 20 dhagax madow ama madow.
7. Kahor bilowga ciyaarta, 20 dhagax madow waxay fadhiyaan laba jibbaarane 1 ilaa 20, dhagaxyada cadna laga bilaabo 31 ilaa 50. Fagaarayaasha laga bilaabo 21 illaa 30 waxay noqon doonaan bilaash (Jaantuska 2).
8. Qeybta ayaa ah madaahibta guud ee dhagaxa iyo marwada.
9. Waxay kuxirantahay hadday yihiin dhagax ama boqorad, jajabku way dhaqaaqaan oo waxay yeeshaan qaabab kala duwan. Dhaqdhaqaaqa qolka ka socda guri ilaa guri kale waxaa loo yaqaan "bixinta".
10. Tallaabada ugu horreysa had iyo jeer waa hindisaha darawalka cad. Ciyaartoydu waxay si isdaba joog ah ugu ciyaaraan googo 'u gaar ah, hal tallaabo markiiba.
11. Dhagaxu waa inuu hormariyo, qaab ahaan, laga bilaabo guriga ay ku hartay guri bilaash ah haadka ku xiga.
12. Dhagaxii gaadhay taajkii taajkii oo halkaa ku hadhay dhammaadka dhaqdhaqaaqa waxaa loo dallacsiiyay boqoradda. Caleemo saarka dhagaxa waxaa lagu calaamadeeyay is dul saaran dhagax kale oo isku midab ah.
13. Waxaa lagugula talinayaa qofka kaa soo horjeedaa boqornimadan
14. Dhagaxa ay haweenku wadaan ayaa leh tayadaas, laakiin ma dhaqaaqi karto iyadoo aan taaj laga dhigin.
15. Boqoradda cusub ee loo caleemo saaray waa inay sugtaa inta qofka ka soo horjeedaa uu hal jeer ciyaaray kahor ficilka.
16. Boqoraddu waxay uga dhaqaaqi kartaa dhinac dhinac oo dhinaca kale ah, gurigii lagu meeleeyay oo loo wareejiyay mid kale, oo ah dookheeda, dhinaca ay ku shaqeysato iyo halka ay xor ka tahay.
Dhaqdhaqaaqa gabalka waxaa loo tixgeliyaa inuu dhammaaday markii laacibku sii daayay markuu dhaqaajiyay.
Haddii ciyaaryahanka dhaqaaqa uu taabto mid ka mid ah qeybihiisa la ciyaari karo, waxaa ku waajib ah inuu dhaqaajiyo.
Haddii dhagaxa la taabtay ama dhaqaaqaya weli aan la sii deyn, waa loo oggol yahay inuu dhigo guri kale, haddii ay suurogal tahay.
Laacibka dhaqdhaqaaqa leh ee raba inuu si sax ah u dhigo hal ama dhowr qaybood sabuuradda waa inuu, kahor inta uusan saas sameyn, si cad uga fogaadaa qofka kaa soo hor jeeda oo leh muuqaalka "AJEITO"
17. Qaadashada qaybaha iska soo horjeeda waa qasab waxayna ku dhacdaa horay iyo gadaal. Tallaal buuxa ayaa loo tiriyaa inuu yahay dhaqaaq keliya oo la ciyaaray. Waa mamnuuc gogo 'laftooda qaado.
18. Haddii dhagax uu taabto, qaab ahaan, jajab ahaan, ka dib markaa uu jiro afargees madhan oo isla xagasha ah, waa inuu boodaa gabalka oo uu qabsadaa laba jibbaaranaha bilaashka ah. Qaybta iska soo horjeedda ayaa laga saarayaa guddiga. Hawlgalkan oo dhammaystiran, oo hore ama gadaal loo samayn karo, waa tallaalka uu sameeyay dhagaxu.
19. Marka boqoradda iyo qaybta ka soo horjeedda ay isla ekaadaan jaantus u dhow ama ka fog isla markaana ay jirto ugu yaraan hal barxad oo faaruq ah oo ka dambeysa qeybta kale. boqoraddu waa inay ka gudubtaa qaybta ka soo horjeedda oo ay fariisataa meel kasta oo bilaash ah gabalka ka dib, doorashadaada Hawlgalka noocan oo kale ah ayay qaadataa marwada.
20. Meel looga baxo waa in si cad oo sax ah loo sameeyaa. La'aan caddayn cad ee toogashada ayaa u dhiganta qalad ay tahay in la saxo marka uu codsado kan ka soo horjeeda. Qaadashada waxaa loo tixgeliyaa inay dhammaatay ka dib saarista maqaarka ama qaybaha ka soo horjeeda.
21. Marka dhagax aad soo qabatay uu si jajab ah ula xiriiro gabalka ka soo horjeedka, gadaashiisa oo ay ku yaalliin laba jibbaaran, qaybta labaad waa inay soo booddaa, ka dibna mid saddexaad iyo wixii la mid ah, oo ku fadhida booska bilaashka ah kan ugu dambeeya. dhaqaaq. Qaybaha ka soo horjeeda ee sidaas lagu qabtay ayaa ah, ka dib markii ay dhammaystiraan dhaqdhaqaaqa, isla markiiba guddiga ayaa laga saaray iyada oo kor loo qaadayo ama loo soo degayo. Hawlgalkan oo dhan waxaa lagu magacaabaa silsilad silsilad ah oo uu sameeyay dhagaxu.
22. Marka boqoraddu, markay qaadanayso, boodka hore ka dib, ay isla egtahay, u dhow ama ka fog tahay, dhagax kale oo ka soo horjeedka ah, oo ku yaal gadaasha barxaddan ama ka sii madhan, boqoradda waa inay ka gudubtaa qaybtan labaad, ka dibna ka gudubtaa mid saddexaad iyo wixii la mid ah oo ku fadhiya boos bilaash ah, oo ah xulashadaada, ka dib gabalkii ugu dambeeyay ee la qabtay.
Qaybaha ka soo horjeeda ee sidaas lagu qabtay ayaa ah, ka dib markii ay dhammaystiraan dhaqdhaqaaqa, isla markiiba laga saaro guddiga iyada oo kor loo qaadayo ama hoos loo dhigayo. Hawlgalkani waa silsiladda silsiladda ah ee ay fulisay marwada.
23. silsilad toogasho ah waa xaaraan guryaha ka bood.
24. On silsilad toogasho ah, waxaa laguu oggol yahay inaad ka gudubto barxad maran hal mar wax ka badan, laakiin gabalka ka soo horjeeda ayaa hal mar oo keliya boodi kara.
25. Silsilad silsilad ah waa in si cad loo fuliyaa, gabal gabal, u bood bood, illaa iyo inta laga gaarayo square square. La'aan caddayn cad oo toogasho ah waxay u dhigantaa qalad ay tahay in la saxo marka la codsado kan ka soo horjeeda.
26. Dhaqdhaqaaqa gabal inta lagu gudajiro silsiladda silsiladda waxaa loo tixgeliyaa inuu dhammaaday markii ciyaaryahanka gabalkii wuu tuurayAma dhamaadka ama dhexda dhaqdhaqaaqa.
27. Qaybaha la qaaday waxaa kaliya laga saari karaa saxaarada ka dib marka silsiladda gabi ahaanba la dhammaystiro. Qaybaha la qabtay waa la tirtirayaa isla marka dhaqdhaqaaqa dhammaado iyo amarka kor u kaca ama soo degaya ee ay ku boodayeen,
Hakad la'aan. Ka takhalusida nidaam la'aanta ee qaybaha la qabtay waxay u dhigantaa qalad ay tahay in lagu saxo codsi ka soo horjeeda.
28. Tirtirista guntimaha waxaa loo arkaa mid dhameystiran marka ciyaariyahanka uu ka saaro qaybaha ugu dambeeya ee la qaatay ama marka Hawlgalkii hawlgalku wuu joogsaday.
29. Qaadashada inta qaybood ee suurtogalka ah ee silsiladda silsiladdu waa qasab. Markaad adeegsanayso sharcigan, boqoraddu mudnaan ma siiso ama ma saarto wax waajib ah. Toogashada, marwada iyo dhagaxu way siman yihiin.
30. Haddii qaybaha la qaadayo, laba ama in ka badan, ay tiro ahaan u dhigmaan, ciyaaryahanka ayaa xor u ah inuu doorto mid ka mid ah fursadahaas, ha ahaado dhagax ama boqorad, hal ama dhowr qabasho.
31. Xaqiijiyay on Qodobka 3.5, dhagaxa kujira silsilad toogasho ah oo kaliya wuxuu marayaa mid ka mid ah guryaha kuyaala barxadda ka soo horjeedka taajka boqortooyada, dhamaadka qabashada wali waa dhagax.
32. Haddii inta ciyaarta lagu guda jiro la ogaado in guddiga si khaldan loo dhigay, iyadoo la tixgelinayo qodobka 2.4, ciyaarta waa in la joojiyaa oo dib loo bilaabaa.
33. Qodobbada qodobka 2.8 waa in la xaqiijiyaa kahor bilawga ciyaarta. Cillad-xumo kasta oo la helo inta lagu guda jiro ciyaarta waxaa lagu xallinayaa qodobka 5.4.
34. Gabal kasta oo ku yaal fagaaraha aan firfircooneyn (hufan) aan firfircooneyn aakhirkana dib loogu celin karo ficil ahaan qodobka 5.4.
35. Haddii ciyaaryahanka sameeyo mid ka mid ah khaladaadka soo socda, kaliya kan ka soo horjeedaa waxaad xaq u leedahay inaad go'aansato in cilladaha jira la saxo ama la dayactiro. Cilad-darrada:
36. Ciyaar laba dhaqdhaqaaq oo isku xiga.
37. Samee dhaqdhaqaaqyo aan caadi ahayn oo ah dhagax ama marwo.
38. Ciyaar mid aad leedahay gogo 'oo mid kale ciyaaro.
39. Dib ugu noqo mid tartan la qabtay.
40. Cayaaro qayb ka soo horjeedda.
41. Ciyaar gabal markii waa suuragal in la qabto.
42. Ka saar qaybaha cadowga ama guddiga u gaar ah sabab la'aan.
43. Qaado tiro ka hooseysa ama ka sareysa inta sharcigu go'aaminayo.
44. Joogso ka hor dhammaadka silsilad joojiye.
45. Ka qaad qayb ka mid ah saxanka, qaab aan qaabaysnayn, inta aysan furku dhammaan.
46. ​​Ka qaad, ka dib qabashada, ka yar tirada gogo 'la qaatay.
47. Ka qaad, ka dib qabashada, qaybaha aan la qaadin.
48. Jooji qaybaha jiidaya silsiladda silsiladda.
49. Qabsasho kadib, ka saar mid ama in kabadan qaybahaaga.
50. Haddii, sabab shil ah awgood, ay jirto a bedelida ama baabi'inta booska ciyaarta, Xaqiiqadan, oo la xaqiijiyey waqtigaas, looma tixgelin karo wax aan caadi ahayn.
51. Haddii ciyaaryahan diido inuu u hoggaansamo qawaaniinta rasmiga ah ee ciyaarta, qofka ka soo horjeedaa wuxuu xaq u leeyahay inuu dhaqan geliyo.
52. Dhaqdhaqaaq kasta oo uu sameeyo ka soo horjeedka ciyaartoy sameeyay fal aan caadi ahayn ama diidaya inuu u gudbiyo sharciyada rasmiga ah ee ciyaarta waxay u dhigantaa aqbalida xaalada. Sidan oo kale, xuquuqda saxitaanka ayaa dhammaata.
53. Saxitaanka qayb ee a sharci darro ama xadgudub.
53. Ciyaarta waxaa loo tixgeliyaa barbaro markii isla booska la soo bandhigo markii seddexaad isla cayaaryahan ayaa mas'uul ka ah dhaqdhaqaaqa.
54. Waa la xaqiijiyay inta lagu jiro 25 dhaqdhaqaaqyo isdaba joog ah, kaliya dhaqaaqeyaasha ayaa la sameeyay, iyada oo aan la qaadin ama la dhaqaajin dhagaxa, ciyaarta waxaa loo tixgeliyaa barbaro.
55. Haddii aysan jirin wax ka badan seddex qaybood, laba qaybood iyo hal dhagax, hal jajab iyo laba dhagax oo ka soo horjeeda xabbad, finalka ayaa loo tixgelin doonaa xarig ka dib ugu badnaan toban dhaqaaq.
66. Dhamaadka labada boqoradood, boqorad iyo dhagax ama boqorad ka dhan ah boqoradda. waxaa loo tixgeliyaa xarig ka dib ugu badnaan shan dhaqaaq.
77. Natiijada ciyaartu waxay leedahay laba natiijo:
Guul lamaane, sidaas awgeedna looga adkaado kan kale.
Isku aadka marka labada ciyaaryahan midkoodna uusan guuleysan.
78. Ciyaaryahanku wuu guuleystaa markuu ka soo horjeedo:
Ciyaar iska dhaaf.
Lahaanshaha dhaqaaqa, ma ciyaari kartid.
Waxaad lumisay dhammaan qaybaha.
Diidan inuu u hoggaansamo qawaaniinta.
79. Tartan ayaa dhacda marka:
Wada-hawlgalayaashu waxay ku caddeeyaan heshiis wadajir ah.
Dalbashada qodobbada qodobka 6aad.
Marka labada ciyaaryahan midkoodna ma guuleysan karo.
80. Adoo ka jaraya tirooyinka 1 illaa 50, sida ku xusan qodobka 2.6., Waxaa macquul ah in la ilaaliyo dhaqdhaqaaqa qaybaha, dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa, labadaba madow iyo caddaan, duubista ciyaarta oo dhan.
81. Qoraalka dhaqdhaqaaqa waa in loo sameeyaa sida soo socota:
Lambarka guriga ee bilowga qaybta waxaa ku xiga lambarka guriga ee bilowga qaybta.
Labadan lambar waxaa ku xiga dash (-) dhaqdhaqaaq fudud.
Haddii ay dhacdo in la qaato lambarrada waxaa lagu kala soocayaa a (x).
Calaamadaha caadiga ah
82. Muujin cad, astaamaha soo socda ee caadiga ah ayaa loo isticmaalaa in lagu muujiyo:
Sifiican u ciyaaray ama dhaqdhaqaaq xoog leh:!
Dalab ugufiican ama aad u xoogan: !!
Dalab daciif ah ama xun 😕
Dalab aad u daciif ah ama liita:??
83. Waa laysku raaci karaa in ciyaar kasta oo ciyaartoy ku waajib tahay ku samee tiro cayiman dhaqdhaqaaqyo waqti xaddidan ah.
84. Xaaladdan oo kale, ciyaartoydu waa inay:
Xidho daawasho gaar ah tartanka.
Diiwaangeli dhaqaaqa guuritaanka kadib, madow iyo caddaanba, koorsada buuxda ee ciyaarta.
85. A waqtiga xaddidan ee ciyaarta oo dhan.
86. Xaaladdan oo kale, isticmaalka daawashada tartanka waa qasab, laakiin qoraal looma baahna.
87. Xirashada saacadda waxaa xukuma xeerarka iyo qawaaniinta tartanka.